Vaovao - Ahoana no fomba fivelaran'ny boaty fonosana?
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostria maoderina sy ny fanatsarana hatrany ny fari-piainan'ny olona, ​​hitombo hatrany ny fangatahan'ny olona amin'ny boaty fanangonana. Noho izany, ny mpanjifa izao dia nametraka fepetra avo lenta kokoa amin'ny kalitaon'ny boaty fonosana. Noho izany dia mitaky fampiharana teknolojia vaovao amin'ny fizotry ny famokarana, ary manatsara hatrany ny haavon'ny automatique an'ny Fitaovana. Rehefa mampifanaraka ny fanovana vaovao sy mahafeno ny fepetra takian'ny mpampiasa samihafa izy ireo vao afaka manatsara ny fifaninanana.
Tokony hosedraina amin'ny tsena izy raha te hahalala raha misy varotra afaka manana varotra tsara na tsia. Ny fonosana dia mitana andraikitra lehibe mandritra ny fizotry ny varotra iray manontolo. Izy io dia mifandray amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny sary tokana mampiavaka azy, mahaliana azy ireo amin'ny entana amin'ny fahitana azy voalohany. Rehefa mivoatra ny toekarem-barotra eto Shina dia mihalasa saina ny ankamaroan'ny mpanjifa. Izany dia tsy vitan'ny hoe mampitombo ny fahasahiranan'ny fivarotana vokatra fotsiny, fa mahatonga ny famolavolana boaty fonosana hihaona amin'ny fanamby mbola tsy nisy toa azy.
Boaty Fanomezana taratasy
Miaraka amin'ny fivoaran'ny toekarena ara-tsosialy mitohy, ny tanjaky ny tsena indostrialy maoderina dia nanjary fampandrosoana ny fonosana ihany koa. Te hampiavaka ny vahoaka ny vokatrao, ny boaty fonosana dia lasa lakilen'ny safidy. Mampiasa akorandriaka fonosana ny olona hanehoany ny fihetseham-pony, ary miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainana ara-nofo sy ara-panahy, dia mitombo hatrany ny fifantohana amin'ny fonosana vokatra.
1. Asehoy ny fonosana lehibe: ny fahitana ny fonosana amin'ny atiny dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fonosana ivelany, izay malaza kokoa amin'ny mpanjifa. Na dia azo atao amin'ny alàlan'ny fisokafan'ny baoritra aza io vokatra io dia maro ireo mpivarotra marika no misafidy ny hahatratra an'io tanjona io amin'ny alàlan'ny fitambaran-fonosana-fametrahana ny varavarankely plastika amin'ny rafitra baoritra. Ny baoritra sy ny plastika dia hanana fitambarana tena mahomby amin'ny ho avy.
2. Fitaovana miloko: nanjary nalaza be tamin'ny fonosana kosmetika ny fitaovana vita amin'ny lamba. Ny firafitra dia matetika vokarina amin'ny alàlan'ny embossing amin'ny ravin-taratasy iray manontolo. Rehefa raisin'ny olona izy dia hitany fa manome sento izay tsy mitovy amin'ny baoritra mahazatra na malama. Na dia betsaka aza ny vokatra farany amin'ny fampiasana malama na matte, ny ankamaroan'ny mpanjifa dia mbola maniry ny vokatra matte ampiarahina amin'ny fitaovana vita amin'ny lamba.
Kitapo taratasy vita pirinty
3. Manelatselatra sy manaitra: Ao anaty boaty fanosotra kosmetika, nanomboka nipoitra ny fonosana vita tamin'ny flashing sy ny fitaovana manintona mba hahatratrarana ny tanjon'ny fisarihana masomaso. Ny fidirana, ny loko ary ny vy dia misy vokany manokana. Miezaka ny manavaka ny vokariny amin'ny alàlan'ity fanavaozana ity ny mpanamboatra, nefa miaraka amin'izay dia tandremo ny vidiny. Noho izany, ny fomba hahatratrarana an'io fisehoana io sy hitehirizana ny vidiny dia ny fampiasana ranomainty metaly na gloss amin'ny fanontana. Ny anjara asan'ny menaka perla. Amin'ny ho avy, dia hahita boaty haingon-tarehy manazava kokoa eny an-tsena isika.
4. Volavola boaty miendrika hafahafa: Orinasa maro kokoa no mitaky endrika boaty fonosana isan-karazany, mitaky fanovana vitsivitsy manimba ny fomban-drazana fa tsy endrika mahazatra. Ny fiovana somary vaovao amin'ity faritra ity dia ny fampiasana kapila farany vita amin'ny plastika vita amin'ny tsindrona.
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny indostria maoderina sy ny fanatsarana hatrany ny fari-piainan'ny olona, ​​hitombo hatrany ny fangatahan'ny olona ny boaty fonosana.